TCDD စည်းမျဉ်းကိုတုန့်ပြန်ခြင်း - 'သူတို့သည်တာဝန်ရှိသူများကိုဆက်လက်ဖုံးကွယ်သွားလိမ့်မည်' | RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး59 CorluTCDD စည်းမျဉ်းကိုတုန့်ပြန်ခြင်း - 'သူတို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်လက်ဖုံးကွယ်သွားကြလိမ့်မယ်'
16 / 11 / 2019 59 Corlu, 59 Tekirdag, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ရထားမတော်တဆမှုများတိုးများလာပြီးနောက်စည်းမျဉ်းအသစ်တစ်ခုရေးဆွဲခဲ့သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ရထားမတော်တဆမှုများတိုးများလာပြီးနောက်စည်းမျဉ်းအသစ်တစ်ခုရေးဆွဲခဲ့သည်။ မတော်တဆမှုဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောစည်းမျဉ်းနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိ bulunmayan များအားဆက်လက်ဖုံးကွယ်သွားမည်ဟု BTS မှEroğluကပြောကြားခဲ့သည်။
17 94 သည်နှစ်ပတ်လည် AKP အုပ်ချုပ်မှုအတွင်းရထားမတော်တဆမှုအနည်းဆုံးခြောက်ခုဖြင့် 500 နိုင်ငံသားများထက် ပိုမို၍ ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်လျစ်လျူရှုခံထားရသောအစိုးရအရာရှိများအားထိရောက်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမရှိကြောင်းစွပ်စွဲချက်များသည်အစီအစဉ်မှမကျဆင်းသေးပါ။ နေ့စဉ်သတင်းစာHüseyinŞimşek၏အဆိုအရပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနသည်ဤမတော်တဆမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းမျဉ်းအသစ်တစ်ခုရေးဆွဲခဲ့သည်။
တရား ၀ င်ပြန်တမ်းတွင်ထုတ်ဝေပြီးနောက်မီးရထားမတော်တဆမှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များအားသုတေသနနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွင်နိုင်ငံသားများ၏အသက်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်တာဝန်ရှိသူများအားဆုံးဖြတ်ချက်တွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ အကဲဖြတ်ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းသည့်စည်းမျဉ်းများမှမတော်တဆမှုများပြီးနောက်ဤကော်မတီမှကျွမ်းကျင်သူများ၏စည်းမျဉ်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်မတော်တဆမှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်အစီရင်ခံရန်အတွက်ဤစည်းမျဉ်းသည် ထို့ကြောင့်မတော်တဆမှုနှင့်အဖြစ်အပျက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကြားစာကိုအကြောင်းကြားစာဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်အီးမေးလ် (သို့) ဖက်စ်ဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ရထားလမ်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်ယန္တရား၊ လျှပ်စစ်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊
ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများသည်မည်သည့်အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမျှပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စည်းမျဉ်းတွင်“ ပြင်ဆင်ထားသည့်အစီရင်ခံစာများသည်သင့်လျော်မှုကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အစီရင်ခံစာတွင်အတိုချုပ်၊ မတော်တဆဖြစ်စဉ်၊ မတော်တဆမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်တွေ့ရှိချက်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်အစီရင်ခံစာ၏အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါ။
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာများyönetmelikတရားစီရင်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာမှလွဲ။ dışında, မတော်တဆမှုနှင့်ပတ်သက်။ စာမေးပွဲပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုစည်းမျဉ်းတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်နေရာနှင့်အတူမျှဝေမရပါ။ သုတေသနပြုလုပ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူများကိုထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြ္ဌာန်းချက်များသည်စည်းမျဉ်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ စည်းမျဉ်းအရ၊ တာဝန်နှင့်နာမဝိသေသနများအရလိုအပ်သောရိုသေလေးစားမှုနှင့်ယုံကြည်မှုခံစားချက်များကိုလှုပ်ခါစေမည့်နည်းဖြင့်ပြုမူဆောင်ရွက်သောကျွမ်းကျင်သူများကိုပယ်ချလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
Taşımaပြင်ဆင်ထားသည့်လုပ်ငန်းသည်မတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြင်းများကိုတားဆီး။ မရနိုင်သောစည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုအာမက်ကယူနိုက်တက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ထမ်းများပြည်ထောင်စု (BTS) ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သူ Ahmet Eroğluကပြောကြားသည်။
ရထားလမ်းမတော်တဆမှုများကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်ကြောင်း၊ သို့သော်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ဤမျှကြီးမားသောချို့တဲ့မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေကြောင်းဖော်ပြသည်။ Eroğluကဤသို့သောအလုပ်ကိုပြုလုပ်နေပါကမတော်တဆမှုနှင့်တာဝန်ရှိသူများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ အမှန်တကယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်မပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဒီအလေ့အကျင့်ကိုဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုစည်းမျဉ်းများကမြင်သည်။ လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများမရှိခြင်းတို့ကြောင့်တာဝန်ရှိသူများ၏စာရင်းစစ်ရလဒ်များကိုလျှို့ဝှက်ထားနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ဘာသာရပ်မဟုတ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်အရေးမကြီးပါ။ (ငါGerçekgünde)
သူတို့ကဖြောင့် high-speed ကိုရထားအဘို့မယ်
Ed မှနယူး Applications ကို izban လိမ့်မယ်စီးဆန္ဒပြ
BTS: စီးပွားရေးလူသတ်မှုများတိုးလာရခြင်းအကြောင်းအရင်း ...
YHT ဘေးအန္တရာယ်အရာရှိများအတွက် CHP မှTanrıkulu
TMMOB: luorlu ရထားမတော်တဆဖြစ်မှုတွင်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၏အခွင့်အရေး
ရထားမတော်တဆမှုတာဝန်ခံ BTS စစ်ကြောစီရင်ကြသည်!
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် TCDD အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြား
အဆိုပါကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့် BTS TCDD ဧည့်သည်များ၏ငှားရမ်းခြင်းမှတုန့်ပြန်
luorlu မိသားစုများမှ TCDD သို့မတော်တဆတုံ့ပြန်မှု!
cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းကိုတုံ့ပြန် Sanliurfa
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအငြိမ်းစားခွမှ Izmir ထံမှတုန့်ပြန်
တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-Sen ဥက္ကဋ္ဌပင်လယ်ကို Cankes ထံမှတစ်ဦးခိုင်တုံ့ပြန်မှုသည်အထိ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ် Sivas တုံ့ပြန်မှုအချိန် Peker အတွက်လုပ်
ရေပေါ်အပူကို Marmaray အတွက်Yenikapıသို့ယူဆောင်လာသည်။